संक्रमणको दोस्रो चरणमा नागरिकलाई सचेत गराउन हुँदैछ ढिलाइ - निष्पक्षखबर
संक्रमणको दोस्रो चरणमा नागरिकलाई सचेत गराउन हुँदैछ ढिलाइ
यसअघि विदेशबाट नेपाल आउने व्यक्तिमा मात्रै कोरोनाको संक्रमण देखिएकोमा नेपालमै रहने व्यक्तिमा पनि सो संक्रमण देखिएपछि सरकारले भाइरसको संक्रमण दोस्रो चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
संक्रमण दोस्रो चरणमा पुगेको ठहर गर्दै सरकारले ‘लकडाउन’ लाई थप मजबुत बनाउँदै एउटा पालिकाबाट अर्काे पालिकामा आवतजावत गर्न बन्देज गरेको छ । के यत्ति गर्दैमा संक्रमणमा सुधार आउला त ? यसतर्फ सरकारले सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यसअघि पनि आवश्यक काम पर्दाबाहेक मानिस घरबाट बाहिर निस्कँदैनथे । त्यसैले एउटा पालिकाबाट अर्काे पालिकामा जाँदैनथे भन्दा पनि हुन्छ । लकडाउनलाई बेवास्ता गर्ने घरबाहिर निस्किरहेकै थिए । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ । यसको अर्थ नागरिक पूर्ण सचेत भएका छैनन् । नागरिक मात्रै होइन स्थानीय सरकारका प्रमुख र प्रतिनिधि नै राहत वितरण र राहत संकलनको क्रममा मास्क नलगाई तथा दूरी कायम नगरी राहत संकलन र वितरण गरिरहेका छन् । यस्तै क्रम रहे अवस्था भयावह हुन सक्छ भन्ने बारेमा धेरैले बुझे पनि पालना भने नगरेको पाइन्छ ।
त्यसैले यसतर्फ सरकार सचेत हुन जरुरी छ । दैनिक अत्यावश्यक सामान किन्न एउटै व्यक्ति बिहान र बेलुका २ पटक निस्कने क्रम उत्तिकै छ । दूध र तरकारीबाहेक अन्य उपभोग्य वस्तु कम्तीमा पनि १ हप्तालाई पुग्ने गरी किन्नुपर्छ भन्ने सोच अझै आएको पाइँदैन । यसतर्फ कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
एन प्याब्सन सुन्दरहरैंचाद्वारा ६१ हजार रुपैयाँबराबरको राहत सामग्री प्रदान
भिडियोमार्फत् बेलायतका डक्टरले दिए इटहरीका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षण
अविरल वर्षाको असरः विराटनगरका विद्यालयमा ३ दिन बिदा
विराटनगरः सोमबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । यसै क्रममा बाढीबाट विस्थापित विराटनगरवासीलाई विराटनगरका विद्यालयमा आश्रय दिइएको छ । सोही कारण विराटनगरका विद्यालय तीन दिन बन्द गर्ने महानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले विस्थापितहरुलाई राख्ने ठाउँको अभाव भएको कारण आकस्मिक बैठक बसेर विद्यालयमा राख्ने निर्णय गर्नुका साथै ३ दिन विद्यालय बिदा गर्ने निर्णय गरेको हो । महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा मंगलबार साँझ बसेको बैठकले अविरल वर्षाका कारण बाढी र डुबानको जोखिम बढ्दै गएकाले असार १५ देखि १७ गतेसम्म सामुदायिक र निजी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतसहित १९ वटै वडाका वडाध्यक्षहरूको उपस्थितिमा बसेको बैठकले बर्खे बिदाबाट कटौती गर्ने गरी तीन दिन विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
सोही बैठकले अविरल वर्षाका कारण महानगरका विभिन्न क्षेत्रहरू डुबानमा परेको र डुबानको प्रकोप अझ बढ्ने सम्भावना रहेकाले आमनागरिकको सुरक्षाका लागि सामुदायिक, संस्थागत र परम्परागत विद्यालयहरूसहित सामुदायिक भवनहरूलाई आवासका लागि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
असार २० गतेदेखि बीपी प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य बीमामार्फतको सेवा बन्द हुने
विराटचोकः स्वास्थ्य बीमाबापत पाउनुपर्ने रकम बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले असार २० गतेदेखि स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीले सोमबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सो जानकारी गराएका हुन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट हुनुपर्ने भुक्तानी नियमित हुन नसक्दा आफू आर्थिक संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्रतिष्ठानले उल्लेख गरेको छ । साथै बोर्डले प्रतिष्ठानले गरेका दाबीहरुलाई एकतर्फी रुपमा विविध शर्तहरु तेस्र्याएर कम भ्यालुएसन गर्ने, रिजेक्ट गर्ने लगायत गतिविधि गर्न थालेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
आम्दानीको ७० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम भएको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानले मुख्य हिस्सा भएको आम्दानी नपाउँदा समस्या भएको जनाएको छ । जसका कारण प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरुको नियमित तलबभत्ता लगायत दैनिक प्रशासनिक खर्च सञ्चालनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आफूले पाउनुपर्ने बाँकी सबै रकम भुक्तान गरी अहिले उठाइएको समस्या समाधान नभएसम्मका लागि बीमाअन्तर्गतका आकस्मिक, बहिरङ्ग र अन्तरङ्ग सेवा बन्द गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
जोखिममा सुन्दरहरैँचाका विपन्न महिलाहरु
४० वसन्त पार गरेकी सुन्दरहरैँचा वडा नं ५ को विपन्न मुसहर समुदाय निवासी रमावती मुसहर (परिवर्तित नाम) ले पाठेघरमा लागेको रोगले संसारबाट बिदा लिनुपर्ला भन्ने सोचेकै थिइनन् । तर त्यस्तै भयो, २०७६ सालमा पाठेघरमा समस्याले उनको प्राण लियो । त्यही साल नै अर्की २ दशक पनि पार नगरेकी अनिता ऋषिदेव (परिवर्तित नाम) गर्भवती भएकी थिइन् । दुःखको कुरा न बच्चालाई बचाउन सकियो न आमालाई नै बचाउन सकियो । सुत्केरी भएपछि शरीर सुन्निने, पेट सुन्निने समस्या भएको थियो । आर्थिक अभाव भएका कारण उनको समयमै राम्रो उपचार हुन सकेन र १ महिना पश्चात आमाको पनि मृत्यु भयो ।
यो घटना पश्चात सो समुदायमका महिलाहरुसँग यस विषयमा छलफल भयो । अन्य महिलालाई पनि यो समस्या छ कि भनी कुरा गर्दा एक पछि अर्को महिलाले आआफ्नो समस्या सुनाउँदै गए । धेरैमा भइरहेको समस्या सुने पश्चात् स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा परामर्श गर्दा नेपालमा धेरै महिलाहरुमा प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या भएका कारण ज्यान गुमाउनु परेको पाइयो । यी रोगहरु सामान्य संक्रमणको रुपमा मात्र सीमित नरही क्यान्सरजस्तो प्राणघातक रोगमा परिणत पनि हुने गर्दछ, भन्ने जानकारी प्राप्त भयो ।
नेपालमा स्तन क्यान्सर पश्चात् पाठेघरको समस्याले महिलाहरुको मृत्यु हुने गरेको विभिन्न समाचार माध्यममार्फत् सूचना प्रवाह भइरहँदा पनि यसबारे अधिकांश मानिसहरुलाई थाहै छैन । अझ विपन्न समुदायका महिलाहरुमा स्वस्थ्य उपचार गर्न गराउन आर्थिक अभाव, सचेतनाको अभाव साथै धामी झाँक्रीलाई पहिले देखाउन जाने जस्ता अन्धविश्वास रहेको पाइन्छ । यसकारण धेरै महिलाहरुमा यौन रोग तथा पाठेघरको समस्या रहन सक्ने अनुमान रहेको जानकारी पाएपछि लुमन्ती (सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा कार्यरत गैरसरकारी संस्था) ले स्वास्थ चौकी तथा परिवार नियोजन संघ विराटनगरको सहकार्यमा ५ स्थानमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण शिविर राख्यो ।
घटना घटेकै स्थानमा लुमन्ती र वडा नं. ५ स्वास्थ्य चौकीको सहकार्यमा पहिलो चरणको शिविर समुदायमै राखियो । स्वास्थ्य चौकीमा परिक्षण सामग्री पर्याप्त व्यवस्था नभएका कारण जम्मा १७ जना लाई मात्र परीक्षण गर्न सकियो । जाँचको परिणामले ३ जनाको मात्र पाठेघर अवस्था राम्रो देखियो । बाँकी १४ जना मध्ये ११ जनामा यौनाङ्ग तथा पाठेघरमा संक्रमण देखियो र ३ जनामा पाठेघर झरेको देखियो । त्यसपछि सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाका १२ वडाका २१ विपन्न समुदायहरुलाई लक्षित गरी ४ चरणको परिक्षण शिविरको आयोजना गरिएको थियो । जसमा परिवार नियोजन संघ विराटनगरले प्राविधिक सहकार्य गरेको थियो । ५ चरणको स्वास्थ्य परीक्षणको परिणामले २ सय १७ जना मध्ये ६४ प्रतिशतमा यौन रोग सम्बन्धी संक्रमण देखियो । ३ प्रतिशतको पाठेघर झरेको र ३१ प्रतिशतको अवस्था समान्य रहेको देखियो भने २ प्रतिशत महिलाहरु परीक्षण गर्नै डराएर परीक्षण गराएनन् । शिविरका दौरानमा स्वास्थ्यकर्मीले ‌औषधी प्रयोग गर्न दिएको सुझाव अनुसार कतिले औषधी प्रयोग गरे, गरेनन् भनी बुझ्दा धेरैले प्रयोग नगरेको भेटियो । यसका कारण आर्थिक अभाव भएकैले महिलाहरु रोगबारे जानकारी पाउँदापाउँदै पनि उपचार नगरेको र औषधी नखाएको पाईयो । केही महिलाहरु रोगबारे जानकार हुँदाहुदै पनि उपचारका लागि नगएको भेटियो ।
शिविरमा पाठेघर परीक्षण गरेकी वडा नं ९ की एक महिला सानै उमेरमा ३ जना छोरीकी आमा भइसकेकी थिइन् । शिविरको परीक्षणले उनलाई पाठेघरको समस्या गम्भीर रहेको देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा पुनः अर्को बच्चा जन्माउन जोखिमपूर्ण छ उनलाई । जोखिमको डरभन्दा छोरा जन्माउनु पर्ने कर छ, उनलाई । विदेशबाट श्रीमान्ले पठाएको रकम जोहो गरेर ५० हजार जम्मा गरिसकेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘यो रकम फेरि पनि छोरी बसेछ भने अप्रेसन गरेर फाल्नका लागि राखेकी हुँ ।’ पैसा हुदाँहुदै पनि उनले ‍औषधी किनेर खाएकी भने थिइनन् । समाजमा स्थापित पित्तृसत्तात्मक मान्यताका कारण परिवार र समाजको दबाबका कारण उनलाई जसरी भए पनि छोरा जन्माउनु छ । तर आफ्नै जीवन जोखिममा परिरहँदा पनि उनलाई औषधी खान भने कुनै चासो छैन ।
शिविरमा परीक्षणमा सहभागी सिनियर अनमी सन्जु शिवाकोटी भन्छिन्, ‘महिलाहरु लाजका कारण आफ्ना रोग लुकाउँछन् । थाहा भै भइहाले पनि सक्दो लुकाउँछन्, जबसम्म रोगले शरिरलाई गलाउदैन । यसको परिणाम धेरै महिलाहरुको मृत्यु भएको पाइन्छ ।’
राम्रो कुरा यस शिविरमा महिलाहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर भएको भेटिएन तर अधिकांश संक्रमित भेटिए । परिवार नियोजन संघ विराटनगर शाखाका प्रमुख शंकर दाहाल भन्छन्, ‘महिलाहरुले व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान नदिनु, रजस्वला हुदाँका बखत अपनाउनुपर्ने सरसफाइप्रति ध्यान नदिनु तथा अपरिपक्व शारीरिक अवस्थामै विवाह गर्नु र बच्चा जन्माउनुका कारण पनि यस्ता रोगको संकम्रमण बढेको हो । यस्ता संक्रमणको लामो समयसम्म उपचार नभएमा एचआईभी तथा पाठेघरको क्यान्सरको जोखिम सक्छ ।’
खुला र सामान्य रुपमा चर्चा नहुने यस्ता यौन रोगहरु चाहे महिला हुन् वा चाहे पुरुष दुवैले लुकाउने गरेको पाइन्छ । नेपाली समाजमा यी विषयमा छलफल लाजको दायराभित्र पर्दै आएको छ । यसका विषयमा छलफल गर्ने मानिसलाई ‘छाडा’ को संज्ञा दिने गरिएको छ । अझ महिलाहरुलाई यस विषयमा छलफल गर्नु भनेको निकै हिम्मतको विषय हुन्छ । यस्ता समस्याबारे छलफल गर्न वा कसैलाई सुचित गर्नु पर्यो भने, त्यो कुरा भनेपछि आउने प्रतिक्रियाका कारण मानशसक तनावको सामना गर्न पनि तयार बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि धेरै महिलाहरु यस विषयमा कुरै गर्न चाहँदैनन् ।
करीब ५० विपन्न समुदायहरु भएको सुन्दरहरैँचाका २२ समुदायका थोरै जनसंख्या २ सय १७ महिलाहरु मात्रमा गरिएको भीआईए परीक्षणमा पनि ६७ प्रतिशतमा संक्रमण भेटिएको छ । यो आफैँमा गम्भीर समस्या हो । स्थानीय तहले शिविर राख्ने तथा जनचेतानामूलक कार्यक्रमका लागि योजना तथा बजेट विनियोजन गर्नु मात्र पनि प्रभावकारी नबन्न सक्छ जबसम्म सघन तवरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।
(लेखक सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा विगत ५ वर्षदेखि लुमन्ती संस्थासँग आबद्ध भई काम गर्दै आएकी छिन् ।)